Alfonso de Frutos | | hevitra, Samsung
Samsung dia niloka mafy tokoa tamin'ny Samsung Galaxy S6 Edge, fitaovana mamaky tany miaraka amina iraka mazava be: hamelombelona ny fizarana finday an'ny mpanamboatra Aziatika.
Ny fiheverana voalohany azoko rehefa notsapaina tao amin'ny rafitry ny MWC dia tsy afaka nanatsara zavatra izy ireo. Ary rehefa afaka izany asehoy anao ny fanadihadiana feno, tonga ny fotoana hanomezako anao ny hevitry ny Samsung Galaxy S6 Edge aorian'ny fampiasana iray volana ho terminal lehibe.
1 Mety tsara amin'ny Samsung Galaxy S6 Edge ny vera
2 Samsung Galaxy S6 Edge, fitaovana ahazoana aina sy mora ampiasaina
3 Ny efijery tsara indrindra eny an-tsena
4 Batterie izay manao ny asa
5 Tontonana roa miolaka nefa tsy mahasoa
6 Touchwiz, ilay namana mahafinaritra
7 Fitaovana fakantsary mendrika ny telefaona Android tsara indrindra
8 Ny fakantsary an'ny Samsung Galaxy S6 Edge dia hahafaly ireo tia sary
9 Famaranana sy hevitra aorian'ny fampiasana ny Samsung Galaxy S6 Edge mandritra ny iray volana
Mety tsara amin'ny Samsung Galaxy S6 Edge ny vera
Iray amin'ireo faritra miavaka indrindra amin'ny sainan'i Samsung vaovao ny famolavolana sy ny famaranana azy. Ary aorian'ny fampiasana iray volana amin'ny Galaxy S6 Edge dia afaka milaza aminao aho fa tsy terminal tsara tarehy fotsiny izy io, fa koa Izy io dia mahatohitra ary miaraka amin'ny famaranana kalitao.
Efa fantatray fa Samsung dia hanao fihodinana mahery miaraka amin'ilay mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana Galaxy S, ny mpanamboatra dia miloka amin'ny fitaovana manara-penitra amin'ny fananganana telefaona vaovao, ary mamela ny polycarbonate manerantany. SY ny fanapahan-kevitra tsy ho nahomby kokoa.
ny Ny famitana ny fitaratra dia nanome azy hafanam-po exclusivity mankany amin'ny Galaxy S6 Edge izay ankasitrahana. Ary ny zava-misy fa misy tontonana miolaka roa sosona, manome endrika tsy manam-paharoa ny telefaona, isa isa.
Ny Samsung Galaxy S6 Edge dia terminal mahafinaritra indrindra amin'ny fikasihana. Tsy vitan'ny hoe manana famaranana kalitao izy io, fa mahazaka aina ihany koa. Tamin'ny voalohany, ny sisiny sisiny dia manaitra ny fananana ny Samsung Galaxy S6 Edge eny an-tananao, saingy tsy maharitra ela vao zatra ny endriny manokana.
Rehefa avy nampiasaina nandritra ny roa andro dia nahatsikaritra antsipiriany tena mahaliana aho: Mahagaga ny fiarovana ny dian-tànana. Raha jerena voalohany dia mety mieritreritra ianao fa ny vera an'ny Galaxy S6 Edge dia ho akanin'ny dian-tanan-tànana, saingy tsy misy zavatra mety ho lavitra ny fahamarinana. Ny sosona oleophobika dia manome valiny mahavariana.
Samsung Galaxy S6 Edge, fitaovana ahazoana aina sy mora ampiasaina
To touch ny Samsung Galaxy S6 Edge dia telefaona tena mahafinaritra. Na dia marina aza fa tsy manana fangejana mitovy amin'ny telefaona plastika izy, Tsy manana ny fahatsapako fa hianjera aho ary, tamin'ity volana ity, tsy nanana olana aho momba an'io. Ny mifanohitra amin'izany no izy, ny Samsung Galaxy S6 Edge dia tena mahazo aina tokoa ny mitazona azy.
Ny hany zavatra tsy dia mampihomehy ahy dia ny fakan-tsary any aoriana, izay mivoaka ao ambadiky ny telefaona. Samsung dia manolo-kevitra ny hametraka ny telefaona miaraka amin'ny efijery manatrika ambany hanararaotana ny fiasan'ny tontolony miolaka roa, zavatra horesahintsika avy eo, fa izaho, ary mino aho fa maro aminareo, no nametraka ny telefaona nanatrika hatrany ny efijery ary ankehitriny tsy hanova ity lafiny ity aho.
Como mivoaka kely ny fakantsary mihozongozona kely ny telefaona. Tombony iray izany rehefa mihozongozona ny telefaona dia voamarikao izany, saingy tsy dia tiako loatra ilay hoe fakan'ny fakantsary foana ny fipetrahan'ny finday.
Raha ny sosona Gorilla Glass 4 dia tsy maintsy lazaina fa mihoatra ny fanatanterahana ny asany io. Ny telefaona dia niaritra ilay rano latsaka hafahafa nefa tsy nahitana mangana. Amin'ity volana fampiasako ity dia nitondra ny Samsung Galaxy S6 Edge aho nefa tsy nisy fiarovana, tao am-paosiko niaraka tamin'ny lakile, vola madinika ary singa hafa mety hanimba ilay fitaovana ary tsy voaporofo izany, zavatra tiako.
Efa hitantsika fitsapana fanoherana sasany an'ny Samsung Galaxy S6 Edge mampiseho ny hamafin'ny efijeryo. Azoko antoka izao fa tsy voahodina ireo horonan-tsary ireo.
Ny efijery tsara indrindra eny an-tsena
Azoko lazaina kely aminao ny toetra ara-teknikan'ny Samsung Galaxy S6 Edge izay mety tsy fantatrao: efijery Super AMOLED QHD, processeur Exynos 7420, 3 GB RAM DDR4, fakantsary 16 megapixel ... Raha fintinina, inona no antenaina ao finday avo lenta araka ny nambaranay tamin'ny fanadihadiantsika voalohany momba ny Samsung Galaxy S6 Edge. Fa rehefa tonga ny manosika, Ahoana ny fahombiazan'ny Samsung Galaxy S6 Edge?
Tsotra dia tsotra ny valiny: tsy misy isalasalana ny Samsung Galaxy S6 Edge no telefaona tsara indrindra azoko teo am-pelatanako. Hanomboka amin'ny firesahako momba ny efijeryo aho. Samsung dia miloka be amin'ny zava-misy virtoaly, ny porofo mazava indrindra dia ny fiarovan-doha Samsung Gear VR, ary asehony fa izy io dia iray amin'ireo faritra be fiahy indrindra amin'ny Galaxy S6 Edge.
Ny efijery 2K dia mety tsara ampiasaina amin'ny headset virtual reality anao, ary rehefa nisedra ny headset Gear VR tamin'ny Galaxy S6 Edge tao amin'ny MWC 2015 aho dia mazava ny kalitao. ambony lavitra noho ny natolotry ny Galaxy Note 4 izy io.
Ary izany tokoa ny efijery an'ny Galaxy S6 Edge dia mahatalanjona fotsiny amin'ny lafiny rehetra: manome loko marevaka sy famirapiratana lehibe ary mamela anao hanamboatra endrika sasany amin'ny efijery.
Ilay tokana nefa miaraka amin'ilay fahitana ivelany amin'ny tara-masoandro mivantana, izay very ny kalitaon'ny S6 Edge, bebe kokoa raha ampitahaintsika amin'ny tontonana IPS izy. Na dia marina aza fa mbola afaka mamaky atiny ianao, dia milatsaka be ny kalitao.
Lojika raha heverintsika fa ny Samsung Galaxy S6 Edge dia mampiditra a Tontonana QHD. Mendrika an-tsarimihetsika amin'ny finday avo lenta ve ny efijery toy izany? Raha heverintsika fa Samsung dia mandefa headset virtoaly virtoaly izay mampiasa ny efijery findain'izy ireo, eny ny valiny dia eny tokoa.
Tena ratsy amin'ny efijery tsara toy izany, ny mpandahateny dia tsy mahatratra par. Na dia marina aza fa manao ny asany ny mpandahateny, ny feo dia tsy kalitao tsara indrindra ary ny toerana misy azy dia mahatonga azy io ho mora foana ny mametaka azy tsy nahy rehefa mijery atiny multimedia na mankafy lalao. Hadisoana tsy azo avela ao anaty telefaona misy famaranana sy famolavolana faran'izay mahafinaritra.
Ilay iray hafa tsara nefa miaraka amin'ny fahatsiarovany anatiny. Ny singa nalefa tamiko dia 6GB Galaxy S32 Edge ary manana latsaky ny 5GB aho amin'izao fotoana izao. Raha raisina an-tsoratra fa nametraka lisitra Spotify vitsivitsy sy lalao efatra aho, ny marina dia diso fanantenana izy.
Marina fa ireo hira alaina dia ireo izay manadanja ny habaka indrindra, fa raha nanana slot karatra micro SD izy, toa ny P8 Lite azonao ampiasaina ilay lovia mitovy amin'ny karatra SIM na Micro SD dia tsy hanana izany ity olana ity. Kapoka eo am-pelatanana amin'io lafiny io.
Batterie izay manao ny asa
Betsaka ny ady hevitra nifanaovana Olana bateria Samsung Galaxy S6 sy S6 Edge, na dia ao amin'ny Galaxy S6 Edge famerenana nataon'i Manuel mpiara-miasa amiko dia niresaka ny fahaleovan-tena kelin'ny terminal. Tsy fantatro raha satria tena tsara vintana aho fa ny bateria an'ny Galaxy S6 Edge izay nosedraina dia naharitra tamiko toy ny telefaona rehetra.
Tamin'izany fomba izany no nitazomana ahy ny finday salan'isa 16 na 17 ora misy efijery eo anelanelan'ny 4 sy 5 ora. Tsy zavatra tsy an'ny mahazatra izany fa tsy hitako koa ny fampisehoana ambany.
Ny zavatra tsikaritro dia izay ny rafitra mamaly haingana ny S6 Edge dia mahafinaritra.Ny fiampangana ny findainao mandritra ny adiny iray mahery dia tsy voavidim-bola ary hita ny tsy fitovizany. Mila mijery fotsiny ilay horonan-tsary izahay, izay nomaninay nampiseho ny tsy fitoviana eo amin'ny famahana ny Samsung Galaxy s1 Edge miaraka amin'ny charger mahazatra amin'ny fampiasana rafitra famandrihana haingana mba hahitana fa ahena ny fotoana ijanany. Ao anatin'ny 6 minitra dia manana bateria mandritra ny 15 ora ianao!
Tontonana roa miolaka nefa tsy mahasoa
Ankafiziko fa misy tontonana miolaka roa, indrindra ny fiheverana fa tànana havia aho ary amin'izay dia afaka manararaotra ireo fiasa rehetra atolotray an'ity telefaona ity amin'ny alàlan'ny ilany havia, fa amin'ny fotoana tena marina dia miaiky aho fa Tsy vao izao no nampiasa ny tontonana miolakolaka.
Mba hanararaotana ny ampahany lehibe amin'ny fahafahany, tsy maintsy ataonao ambany ny finday. Ary tsy hamitaka anao aho, toy ny mahafinaritra ny fahitana ny hazavan'ny takelaka miolaka rehefa mahazo antso ianao, tsy hanova ny fahazarako amin'izany antsipiriany izany aho.
Fomba iray hafa ananan'io ny fahaizana mijery fampandrenesana amin'ny fisintomana ny rantsan-tànanao amin'ny sisiny. Amin'ity fihetsika ity dia azonao atao ny mahita ny fotoana, raha nahazo hafatra ianao ary amin'ny zavatra hafa. Endri-javatra iray hafa tsy dia manampy satria tsy azonao atao ny mamaky ilay fampandrenesana amin'ny sisin'ny telefaona.
Misy koa a haingam-pandeha Io dia ahafahanao manamboatra fifandraisana hatramin'ny 5 hiantsoana azy ireo na handefasan'izy ireo hafatra haingana. Miresaka momba ny SMS aho, tsy mamela anao handefa fampandrenesana amin'ny alàlan'ny WhatsApp na serivisy fandefasana hafatra eo noho eo. Na inona no mitovy, fiasa hafa tsy misy ilana azy.
Ny safidy ihany no ampiasaina dia ny famataran'ora. Toa fotoana tena tsara io fotoana niverenan'ny backlit io. Azonao atao ihany koa ny manamboatra amin'ny isan'ora izay tianao ho hita ny fotoana backlit.
Tsotra ny fehin-kevitro: hampiasa ilay tontonana miolakolaka ve ianao? tsy misy. Mendrika handoa 100 euro bebe kokoa ve ianao raha manana ny Galaxy S6 Edge? Raha ny hevitro, eny satria manana telefaona hafa miaraka amina endrika mahavariana, fa tsy noho ny fiasany.
Touchwiz, ilay namana mahafinaritra
Araka ny azonao an-tsaina, ny Samsung Galaxy S6 Edge dia afaka mamindra ny lalao rehetra nefa tsy mikorontana, fa ahoana ny fihetsiky ny mpamorona Koreana amin'ny ankapobeny? Mbola taratra ve i Touchwiz? Soa ihany fa nahavita namaha ity olana manelingelina ity i Samsung.
Ary io ihany no farany Mandroso tsara i Touchwiz raha tsy misy ny lag malaza malaza izay nilanja ny sosona manokana an'ny Samsung. Ny Samsung Galaxy S6 Edge dia miasa toy ny landy aorian'ny fampiasana iray volana mahery.
Mba hamahana ny olana Touchwiz, Samsung dia nifantoka tamin'ny fandefasana be loatra ny rafitra kely kokoa amin'ny alàlan'ny tsy fampidirana ireo fampiharana azy be dia be, ho fanampin'ny fanamorana ny sasany amin'ireo safidy azo atao.
Eny, mbola misy ny hitsin-dàlana mahafinaritra be. Ny iray amin'ireo izay nampiasaiko indrindra tamin'ny fampiasa azy dia ny fampihenana ny haben'ny fampiharana. Mila soloinao fotsiny ny rantsan-tanananao avy eo amin'ny sisiny havia ambony ka hatrany amin'ny sisiny ankavanana ambany mba hampihenana ny haben'ny fampiharana nosokafanao, ahafahanao manana rindranasa marobe eo amin'ny efijery miaraka amin'izay. Azonao atao koa ny mampihena kely ity rindranasa ity mba hiseho boribory kely miaraka amin'ilay fampiharana ahena. Mahasoa sy tsotra.
Indraindray isika dia afaka mahita fotoana valiny somary avo kokoa noho ny mahazatra rehefa manao tetezamita eo amin'ireo fampiharana samihafa, saingy mahalana izy no mitranga ary kely ny fahasamihafana.
Fizarana iray hafa miavaka dia miaraka amin'ny fitendry. SY ny keyboard an'ny Samsung Galaxy S6 Edge dia tena tsara. Ho fanampin'ny fahatsiarovana ireo teny ampiasaintsika, dia mandeha tsara ny fitendry.
Ny Galaxy S6 Edge dia tsy miaraka amin'ny Swiftkey efa napetraka mialoha, ary tsy mila izany izy. Ny kitendry teratany Samsung dia manatanteraka tsara ny iraka ampanaovina azy, koa amin'ity lafiny ity dia mihoatra ny fanompoana isika fa tsy mila mampiasa kitendry antoko fahatelo.
Toy ny mahazatra ao amin'ny terminal Samsung, Galaxy S6 Edge dia tsy misy radio FM. Zavatra iray tsy azoko izany. Sarotra be ho an'i Samsung ve ny mampiditra radio FM amin'ny findain'izy ireo? Tsy mitovy ny mampiasa radio alaina alaina izay, ankoatry ny fandefasana amin'ny fanemorana ny signal, dia misy ny fandaniana data.
Fitaovana fakantsary mendrika ny telefaona Android tsara indrindra
Samsung dia nianatra tamin'ny lesoka nataony. Ny sensor sensor amin'ny rantsan-tànana amin'ny Samsung Galaxy S6 Edge dia tsy misy itovizany amin'ilay Galaxy S5. Amin'ity tranga ity dia miasa tanteraka ny sensor biometrika, mahafantatra haingana ny dian-tongotra izay efa notahirizintsika tamin'ny fametrahana tsotra ny rantsan-tanananao amin'ny bokotra fanombohana.
Hita ao amin'ny horonantsary fa rehefa mampiasa rantsan-tànana izay nampifandraisiko teo aloha aho, ny sensor sensor an'ny Samsung Galaxy S6 Edge dia mahafantatra ny dian-tananay avy amin'ny lalana rehetra. Ahoana raha misy maka ny findainao? Matokia fa aorian'ny fanandramana maromaro dia mihidy ny telefaona ary mangataka tenimiafina izay nidirantsika teo aloha.
Ankehitriny satria lasa lamaody be ny mpamaky ny rantsan-tànana, dia afaka milaza isika fa nofantsihan'i Samsung izy mba hanome vahaolana izay afaka mijoro amin'ny iPhone 6 an'ny Apple na fitaovana Android manana sensor momba an'io karazana io.
Ny fakantsary an'ny Samsung Galaxy S6 Edge dia hahafaly ireo tia sary
Ny fakantsary dia iray amin'ireo tanjaky ny Samsung Galaxy S6 Edge. Efa niresaka momba izany isika tamin'ny lahatsoratra maromaro izay nanehoanay ny Ny fahasamihafana misy eo amin'ny fakantsarin'ny Samsung Galaxy S6 Edge sy ny fakantsary an'ny iPhone 6 Plus, ary rehefa afaka iray volana miaraka amin'ny Galaxy S6 Edge dia tsy afaka nifaly aho.
Hanombohana azy, Samsung dia nampiditra rafitra fidirana haingana amin'ny fakantsary: Mila tsindrio fotsiny ny bokotra fanombohana indroa hanokafana ny fakantsary. Haingana sy mahomby. Haingam-pandeha tokoa ny hafainganam-pandehany misambotra sary, na dia amin'ny toe-javatra izay tsy maintsy hakana fahazavana araka izay azo atao aza ny solomaso alohan'ny maka sary.
Su maodely marobe manolotra antsika isan-karazany ny mety; Mila selfie retouched ve ianao? Ny maody hatsaran-tarehin'ny Galaxy S6 Edge dia mampanantena sary tena izy na eo aza ny famerenam-baravarana, tsy misy ifandraisany amin'ireo terminal Shinoa izay ataony fotsiny dia ny mampitombo ny haben'ny masonao tsy mifandanja.
Ny lalana mankany raketo horonan-tsary mihetsika miadana manolotra fampisehoana mahatalanjona, ahafahanao mirakitra ny filaharana ary manova avy amin'ilay finday iray ihany izay ampahan'ny horonan-tsary milalao miadana sy amin'ny hafainganana
Na ny fakana sary amin'ny alina aza dia efa hitako ny fakantsarin'i Samsung Galaxy S6 Edge dia dingana iray mialoha ny mpifaninana aminy. Afaka manatsoaka hevitra isika fa ao amin'ny faritra fakan-tsary ny Samsung Galaxy S6 Edge dia tsy manana mpifanandrina.
Famaranana sy hevitra aorian'ny fampiasana ny Samsung Galaxy S6 Edge mandritra ny iray volana
Samsung dia nanao asa tena tsara. Ilay mpanamboatra Koreana dia mila vokatra iray izay hamerina ny fitokisan'ny mpanjifany. Ary tsy isalasalana fa samy fahombiazana tanteraka ny Samsung Galaxy S6 Edge sy ny Galaxy S6.
Ho an'ny asako dia nanana telefaona an-jatony teny an-tanako aho ary sambany aho nanana sabatra Samsung voalohany nahavita io kalitao io, ankoatry ny fampisehoana miavaka, ny fakan-tsary tsara indrindra eny an-tsena ary Touchwiz miasa kokoa.
Ary raha raisinay ny fihenan'ny vidin'ny terminal roa farany, raha mitady finday premium sy maharitra ianao, dia tsy handiso fanantenana anao ny Samsung Galaxy S6 Edge. Mazava ho azy, raha mampiasa serivisy betsaka toa ny Spotify ianao, izay mitaky fitehirizana antontan-kevitra marobe amin'ny findainao, fikarohana tsara kokoa aryl Samsung Galaxy S6 Edge 64 GB, izay mitentina 799 euro. Ary ireo 100 euro ireo dia afaka manisy fiovana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Galaxy S6 Edge, izao no zavatra niainako aorian'ny fampiasako iray volana